KENKAN WƆ Amharic Armenian (West) Croatian Czech Danish Dutch English French German Greenlandic Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Rarotongan Romanian Russian Samoan Slovak Slovenian Twi Ukrainian Vietnamese
1. (a) Mpae bɛn na Yesu bɔ maa n’asuafo no anadwo ansa na ɔrewu no? (b) Dɛn nti na na ‘wiase no mu a wommfi’ no ho hia saa?
ANADWO ansa na wɔrebɔ Yesu asɛndua mu no, ɔbɔɔ mpae denneennen maa n’asuafo no. Esiane sɛ na onim sɛ Satan bɛhyɛ wɔn so denneennen nti, ɔsee n’Agya sɛ: “Mensrɛ sɛ: Yi wɔn fi wiase, na mmom sɛ: Yi wɔn fi ɔbɔne no ho sie! Womfi wiase, sɛnea me nso mimfi wiase no.” (Yohane 17:15, 16) Dɛn nti na ho a wɔtew fi wiase no ho no hia kɛse saa? Efisɛ Satan ne ne sodifo. Wɔn a wɔyɛ wiase na fã no wɔ ne tumidi ase. (Yohane 14:30; 1 Yohane 5:19) Eyi nti, ɛho hia yiye sɛ Kristoni biara te nea “womfi wiase” kyerɛ no ase. Ná ɛno yɛ nokware wɔ Yesu ho dɛn?
2. Akwan horow bɛn so na na Yesu ‘mfi wiase’?
2 Ɛda adi sɛ Yesu antew ne ho amfi afoforo ho. ‘Wiase a omfi’ no nkyerɛ sɛ onni dɔ mma afoforo. Mmom no, ofi kurow so kɔɔ kurow so kɔkaa Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa kyerɛɛ wɔn. Ɔsaa ayarefo yare, obuee anifuraefo ani, onyan awufo na ɔde n’ankasa nkwa mpo too hɔ maa adesamma. Nanso wannɔ nkurɔfo a ná wiase honhom ahyɛ wɔn ma no amumɔyɛ su ne wɔn nneyɛe bɔne ahorow no. Ɔbɔɔ ɔbrasɛe akɔnnɔ horow, honam fam adedodowpɛ asetra ne anuonyampɛ ho kɔkɔ. (Mateo 5:27, 28; 6:19-21; Luka 12:15-21; 20:46, 47) Sɛ́ anka obesuasua nkurɔfo a wɔyɛ Onyankopɔn ho ananafo asetra kwan mmom no, Yesu nantew Yehowa akwan so. (Yohane 8:28, 29) Wɔ amansɛm mu ɔham ahorow a na ɛfa Romafo ne Yudafo ho no mu no, ɛwom sɛ na Yesu yɛ Yudani de, nanso wankogyina afã biara.
“M’ahenni Mfi Wi Yi Ase”
3. (a) Anototo bɛn na Yudafo nyamesom akannifo de baa Yesu so wɔ Pilato anim, na dɛn ntia? (b) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ na Yesu ani nnye ɔdesani ɔhene a ɔbɛyɛ ho?
3 Nanso Yudafo nyamesom akwankyerɛfo no totoo Yesu ano sɛ na ɔretutu ɔman no ase. Wɔma wɔkyeree no de no kɔmaa Roma amrado Pontio Pilato. Nea ɛhaw wɔn ankasa ne sɛ Yesu nkyerɛkyerɛ no paa wɔn nyaatwomyɛ ho ntama. Nanso sɛnea ɛbɛyɛ na wɔanya amrado no ma wayɛ ade atia no no, wɔtotoo n’ano sɛ: “Yɛahu sɛ onipa yi resɛe yɛn man, na wabara sɛ wonnyi Kaesare tow, na ɔka sɛ ɔno ankasa ne ɔhene Kristo no.” (Luka 23:2) Nokwasɛm no ne sɛ na afe biako nen a nkurɔfo no pɛe sɛ wɔde Yesu si hene, nanso wampene. (Yohane 6:15) Ná onim sɛ ɔbɛyɛ ɔsoro Hene ne sɛ bere a ɔbɛyɛ Ɔhene no nnya nnui ɛ, na na ɛnyɛ demokrase anaasɛ ɔmanfo adeyɛ bi so na wobɛfa de no asi ahengua so, na mmom Yehowa Nyankopɔn na ɔbɛyɛ.
4. Dɛn na nokwasɛm ahorow no da no adi wɔ Yesu su a ɛfa ‘tow a wotua ma Kaesare’ ho no ho?
4 Ɛdefa tow ho no, nnansa pɛ ansa na wɔrekyere Yesu no, na Farisifo no abɔ mmɔden sɛ wobenya no ma waka biribi a ɛbɛkyekyere no wɔ asɛm yi ho. Nanso bere a Yesu rema wɔn anifere kwan so asemmisa no ho mmuae no, ɔkae sɛ: “Momfa denare [a ɛyɛ Romafo sika] mmɛkyerɛ me! Hena mfonini ne nkyerɛwee na ɛwɔ so yi?” Bere a wɔkae sɛ, “Kaesare de” no, obuae sɛ: “Ɛnde momfa Kaesare de mma Kaesare ne Nyankopɔn de mma Onyankopɔn.”—Luka 20:20-25.
5. (a) Asuade bɛn na Yesu de maa n’asuafo no bere a wɔkyeree no no? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu kyerɛkyerɛɛ nea ɔyɛe no mu kyerɛɛ Pilato?
5 Nea ɛbae bere a wɔkyeree Yesu no kyerɛe sɛ na ɛnyɛ sɛ ohwanyan atuatew tia Roma, na ná ɔmpɛ sɛ n’asuafo bɛyɛ saa. Romafo asraafo ne Yudafo a wokurakura nkrante ne nkontimmaa boom bɛkyeree Yesu. (Yohane 18:3, 12; Marko 14:43) Bere a ɔsomafo Petro huu eyi no, ɔtwee nkrante de bɔɔ mmarima no mu biako twaa n’aso nifa. Nanso Yesu kaa Petro anim sɛ: “Fa wo nkrante san hyɛ nea ɛhyɛ, na wɔn a wɔtwe nkrante nyinaa, nkrante ano na wobewu.” (Mateo 26:51, 52) Ade kyee anɔpa bere a na Yesu gyina Pilato anim no, ɔkyerɛkyerɛɛ nea enti a ɔyɛɛ saa no mu sɛ: “M’ahenni mfi wi yi ase. Sɛ m’ahenni fi wi yi ase a, anka m’asomfo bɛko na wɔamfa me anhyɛ Yudafo no nsa; nanso m’ahenni mfi ha.”—Yohane 18:36.
6. Dɛn na efii saa asenni no mu bae?
6 Bere a Pilato susuw adanse no ho wiei no, ɔkyerɛe sɛ “afobusɛm biara” nni nea wɔde totoo Yesu ano no mu. Nanso ogyaa mu maa nea basabasayɛfo no hwehwɛ no na ɔma wɔbɔɔ Yesu asɛndua mu.—Luka 23:13-15; Yohane 19:12-16.
Asuafo Di Owura No Akwankyerɛ Akyi
7. Ɔkwan bɛn so na tete Kristofo no kyerɛe sɛ wɔpow wiase honhom no nanso wɔwɔ ɔdɔ ma nkurɔfo no?
7 Tete Kristofo ho kyerɛwtohɔ a ɛwɔ Bible ne abakɔsɛm nhoma afoforo mu nyinaa kyerɛ sɛ Yesu asuafo tee nea “womfi wi yi ase” no hwehwɛ fi wɔn hɔ no ase. Wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛkwati wiase honhom no. Esiane sɛ wɔtwee wɔn ho fii Romafo mmoa agoru ne agodibea anigyede a basabasayɛ ne ɔbrasɛe wom no ho nti, wodii wɔn ho fɛw sɛ adesamma abusua no atamfo. Nanso sɛ anka wɔbɛtan wɔn yɔnko nnipa mmom no, wɔyeree wɔn ho boaa afoforo na ama wɔanya Onyankopɔn nkwagye nsiesiei a efi ɔdɔ mu no mu mfaso.
8. (a) Esiane sɛ na tete asuafo no ‘mfi wiase’ nti, dɛn na ɛbaa wɔn so? (b) Nanso wobuu amammui sodifo ne tow a wobetua no dɛn, na dɛn ntia?
8 Sɛnea ɛbae wɔ wɔn Wura no fam no, wɔn nso wohyiaa ɔtaa a emu yɛ den, mpɛn pii wɔ aban mpanyimfo a wɔaka wɔn ho atosɛm akyerɛ wɔn no nsam. (Yohane 15:18-20) Nanso ɔsomafo Paulo kyerɛw kɔmaa mfɛfo Kristofo a wɔwɔ Roma no wɔ bɛyɛ 56 Y.B. mu de hyɛɛ afotu a na Yesu de ama no mu den. Paulo hyɛɛ wɔn sɛ ‘wɔmmrɛbrɛ wɔn ho ase nhyɛ tumi a ɛwɔ anuonyam [amammui sodifo] no ase, na tumi biara nni hɔ sɛ nea efi Nyankopɔn.’ Ɛnyɛ sɛ Yehowa na ɔhyehyɛ wiase nniso horow no na mmom wama wɔn kwan sɛ wonni tumi. Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ “tumi a ɛwowɔ hɔ no, Onyankopɔn na wahyɛ ato hɔ,” efisɛ Onyankopɔn hui na ɔkaa sɛnea wobedidi so abedi tumi no siei. Enti “tumi a ɛwɔ anuonyam” no ne “nea Onyankopɔn ahyɛ ato hɔ” mprempren, kosi sɛ Onyankopɔn ankasa Ahenni a ɛwɔ Yesu Kristo nsam no bɛyɛ nniso koro pɛ a edi asase so. Enti Paulo tuu Kristofo fo sɛ wɔmfa nidi a ɛfata mma wiase mpanyimfo na wontua tow horow a wogye no.—Romafo 13:1-7; Tito 3:1, 2.
9. (a) Bere a yɛrebrɛ yɛn ho ase ama “tumi a ɛwɔ anuonyam” no, dɛn nso na ɛnsɛ sɛ yebu yɛn ani gu so? (b) Ɔkwan bɛn so na abakɔsɛm kyerɛ sɛ tete Kristofo dii Yesu nhwɛso akyi pɛpɛɛpɛ?
9 Nanso Paulo anka ankyerɛ wɔn sɛ wɔmmrɛ wɔn ho ase koraa a wommu Onyankopɔn Asɛm ne wɔn Kristofo ahonim ho akontaa biara. Ná wonim sɛ Yesu som Yehowa nkutoo na wampene sɛ ɔbɛma nkurɔfo de no asi hene ne sɛ na waka akyerɛ Petro sɛ ɔmfa ne nkrante no nhyɛ hɔ. Wofi ahonim pa mu dii wɔn Wura no akanni akyi. Nhoma a wɔfrɛ no On the Road to Civilization—A World History (a Heckel ne Sigman kyerɛwee no, nkratafa 237, 238) bɔ amanneɛ sɛ: “Kristofo ampene so sɛ wɔbɛyɛ Roma ɔmamma nnwuma binom. Kristofo no . . . tee nka sɛ ɛto wɔn gyidi mmara sɛ wɔbɛyɛ asraafo adwuma. Wɔrennye amammui dibea. Wɔrensom ɔhempɔn no.”
10. (a) Dɛn nti na Kristofo a na wɔwɔ Yerusalem no yɛɛ nea wɔyɛe wɔ 66 Y.B. mu no? (b) Ɔkwan bɛn so na ɛno yɛ nhwɛso pa?
10 Ɛdefa Yesu asuafo no bere so amansɛm ne sraadi ntawntawdi ahorow ho no, wokuraa afã biara a wonni no mu denneennen. Wɔ afe 66 Y.B. mu no, Yudafo a na wɔwɔ Roma mantam Yudea mu no tew atua tiaa Kaesare. Ntɛm ara na Roma asraafo dɔm twaa Yerusalem ho hyiae. Dɛn na Kristofo a wɔwɔ kurow no mu no yɛe? Wɔkaee Yesu afotu a ɔde maa wɔn sɛ mma wɔmmfa wɔn ho nhyɛ mu na wɔnnkɔka asraafo dɔm a wɔreko no ho no. Bere a Roma asraafo dɔm no san wɔn akyi kɔe bere tiaa bi no, Kristofo no de hokwan no dii dwuma na woguan twaa Yordan asubɔnten no kɔɔ Pela mmepɔw no so. (Luka 21:20-24) Wɔnam wɔn ho a wɔamfa anhyɛ mu no so yɛɛ nhwɛso pa maa Kristofo a wɔbɛba akyiri yi no.
Kristofo A Wonni Afã Biara Wɔ Awiei Bere No Mu
11. (a) Adwuma bɛn na Yehowa Adansefo yɛ a wonni adagyew, na dɛn ntia? (b) Dɛn ho na wonni afã biara?
11 So abakɔsɛm kyerɛwhotɔ kyerɛ sɛ kuw bi a wɔwɔ “awiei bere” yi mu fi 1914 Y.B. reba no afa afã biara a Kristofo nni kwan so de asuasua saa tete Kristofo no anaa? Yiw, Yehowa Adansefo ayɛ saa. Wɔakɔ so aka asɛm wɔ asase so nyinaa a wonni adagyew de akyerɛ sɛ Onyankopɔn Ahenni no ne ɔkwan biako pɛ a wɔnam so bɛma asomdwoe, yiyedi ne anigye a ɛtra hɔ daa atumi aba ama trenee adɔfo wɔ asase so nyinaa. (Mateo 24:14) Na ɛdefa amanaman no ntam ɔham ahorow ho no, wɔakura afã biara a wonni no mu denneennen.
12. (a) Ɔkwan bɛn so na afã biara a Adansefo no nni no bɔ asɔfo no nneyɛe ahorow abira? (b) Dɛn na ɛka afã biara a Yehowa Adansefo nni wɔ amammuisɛm mu no ho?
12 Nea ɛne eyi bɔ abira koraa no, Kristoman asɔfo de wɔn ho hyehyɛ wiase amammuisɛm mu pii. Wɔ nsase bi so no, wɔde nnamyɛ yɛ ade de boa anaa de tia wɔn a wɔhwehwɛ amammui dibea no. Asɔfo no mu binom ankasa kura amammui dibea. Afoforo hyɛ amansɛmdifo so denneennen sɛ wɔmpene nhyehyɛe horow a asɔfo no gye tom no so. Wɔ mmeae afoforo no, asɔfo a “wokura tete adwene” no de wɔn ho bata nnipa a wodi tumi no ho bere a ebia asɔfo ne asomfo a “wokura nnɛɛmafo adwene” no bɛyɛ wɔn a wɔboa akofo akuw horow a wɔreyɛ adwuma de atu wɔn agu no. Nanso Yehowa Adansefo mfa wɔn ho nhyehyɛ amansɛm mu, ɛmfa ho sɛ ɔman bɛn mu na wɔte no. Wɔmmfa wɔn ho nhyehyɛ nea afoforo yɛ sɛ ebia wɔbɛdɔm amammui kuw bi, ahwehwɛ dibea anaasɛ wɔbɛtow aba de apaw afoforo no mu. Nanso, esiane sɛ Yesu kae sɛ n’asuafo ‘renyɛ wiase no fã’ nti, Yehowa Adansefo mfa wɔn ho nhyɛ amammui dwumadi ahorow mu ɔkwan biara so.
13. Ɛdefa ɔko mu kyɛfa a Yehowa Adansefo benya ho no, dɛn na nokwasɛm ahorow no da no adi fa wɔn gyinabea ho?
13 Sɛnea Yesu ka siei no, wɔ “awiei bere” yi mu no, amanaman adi ako pii, na mpo aman ahorow mu akuw horow afa akode de adi dwuma atia wɔn ho wɔn ho. (Mateo 24:3, 6, 7) Nanso wɔ eyi nyinaa mu no, gyinabea bɛn na Yehowa Adansefo apaw? Afã biara a wonni wɔ ntawntawdi a ɛtete saa mu no yɛ nea wonim no yiye wɔ wiase nyinaa. Nea ɛne gyinabea a Yesu Kristo pawee a akyiri yi n’asuafo a wodi kan no daa no adi hyia no, The Watchtower no kae wɔ November 1, 1939 de no mu sɛ: “Wɔn a wɔwɔ Awurade afã no nyinaa rennyina amanaman a wɔko no mu biara afã, na wɔbɛyɛ Teokrat kɛse [Yehowa] no ne ne Hene [Yesu Kristo] de koraa.” Nokwasɛm ahorow no kyerɛ sɛ Yehowa Adansefo a wɔwɔ aman ne tebea horow nyinaa mu no kɔ so kura saa gyinabea yi mu. Wɔmmaa wiase yi amansɛm ne akodi a ɛde mpaapaemu ba no nsɛee wɔn amanaman ntam onuayɛ sɛ Yehowa asomfo no.—Yesaia 2:3, 4; fa toto 2 Korintofo 10:3, 4 ho.
14. (a) Esiane afã biara a Adansefo no nni nti, dɛn nso na wɔapow sɛ wɔbɛyɛ? (b) Wɔkyerɛkyerɛ nea enti a wɔnyɛ eyi no mu dɛn?
14 Abakɔsɛm mu nokwasɛm ahorow mu nhwehwɛmu kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ Yehowa Adansefo powee sɛ wɔbɛhyɛ asraafo ntade na wɔakura atuo nko, na mmom wɔ mfe aduonum ne nea ɛboro saa a atwam no mu no, wɔampene nso sɛ wɔbɛyɛ asraafo adwuma a ɛnyɛ akodi anaasɛ wobegye nnwuma afoforo a wɔbɛyɛ de asi sraadi ananmu. Dɛn ntia? Efisɛ wɔasua Onyankopɔn ahwehwɛde ahorow na afei wofi ahonim pa mu asi wɔn ankasa gyinae. Obiara nkyerɛ wɔn nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Saa ara nso na wɔmfa wɔn ho nhyehyɛ nea afoforo pɛ sɛ wɔbɛyɛ mu. Nanso sɛ wɔfrɛ Yehowa Adansefo sɛ wɔmmɛkyerɛkyerɛ wɔn gyinabea no mu a, wɔma wohu sɛ, sɛ́ nnipa a wɔahyira wɔn ho so ama Onyankopɔn no, asɛyɛde da wɔn so sɛ wɔde wɔn nipadua di dwuma wɔ ne som mu na afei wɔrentumi nnan eyinom mma asase so awuranom bi a wɔreyɛ nea ɛne Onyankopɔn atirimpɔw bɔ abira.—Romafo 6:12-14; 12:1, 2; Mika 4:3.
15. (a) Esiane sɛ Yehowa Adansefo kura wɔn ho a wɔtew fi wiase no ho mu nti, dɛn na ɛba wɔn so? (b) Bere a wɔde wɔn ato afiase mpo no, ɔkwan bɛn so na Kristofo nnyinasosɛm ahorow kyerɛ wɔn kwan?
15 Nea afi mu aba no ayɛ sɛnea Yesu kae no: “Sɛ mumfi wiase . . . nti na wiase tan mo.” (Yohane 15:19) Wɔde Yehowa Adansefo pii agu afiase esiane sɛ wɔremmu wɔn afã biara a Kristofo nni no so nti. Wɔadi ebinom atirimɔdensɛm de akodu owu mu mpo. Afoforo akɔ so ada afã biara a wonni no adi wɔ afiase a wɔde wɔn to mfe pii mu. Nhoma Values and Violence in Auschwitz (a Anna Pawelczynska, kyerɛwee kratafa 89) no bɔ amanneɛ sɛ: “Na obiara nim sɛ Yehowa Ɔdansefo biara [a ɔwɔ nneduafo nsraban mu] renyɛ ahyɛde bi a ɛne ne nyamesom gyidi ne n’adwene bɔ abira anaasɛ nneyɛe biara a etia obi foforo, mpo sɛ saa onipa no yɛ owudifo ne SS panyin a. Nanso, ɔbɛyɛ adwuma foforo biara, nea ɛba fam koraa mpo, sɛnea n’ahoɔden betumi nyinaa, sɛ ɛyɛ nea wɔ abrabɔ fam no onni afã biara a.”
16. (a) Ɛhe na amanaman nyinaa retu aprenten akɔ, na enti dɛn na Yehowa Adansefo hwɛ yiye sɛ wɔbɛkwati? (b) Ɛnde, dɛn nti na wiase no ho a yɛbɛtew yɛn ho afi no yɛ aniberesɛm saa?
16 Yehowa Adansefo nim sɛ amanaman nyinaa atu aprenten rekɔ “Onyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ no, da kɛse no mu ko no” wɔ Harmagedon. Sɛ́ nkurɔfo a wɔaka abom no, Yehowa asomfo gyina ne Mesia Ahenni no afã. Enti wɔhwɛ yiye sɛ wɔbɛkwati sɛ wɔbɛma kwan ma wɔadaadaa wɔn ma wɔakogyina gyinabea a ɛsɔre tia saa Ahenni no. (Adiyisɛm 16:14, 16; 19:11-21) Wohu aniberesɛm a Yesu asɛm a ɔkae a ɛkyerɛ sɛ ne nokware akyidifo ‘mfi wiase’ no yɛ no. Wonim sɛ ɛrenkyɛ na wiase dedaw yi atwam akɔ, na wɔn a wɔyɛ Onyankopɔn apɛde nokwarem no nkutoo na wɔbɛtra hɔ daa.—1 Yohane 2:15-17.
Asɛm No Mu Nti̇̃mu
● Ɔkwan bɛn so na Yesu daa nea “womfi wiase” kyerɛ no adi?
● Dɛn na ɛma yehu tete Kristofo no su wɔ (1) wiase honhom ho? (2) amammui sodifo ne tow a wotua ho? (3) sraadi ho?
● Akwan horow bɛn so na Yehowa Adansefo a wɔwɔ hɔ nnɛ no adi wɔn Kristofo afã biara a wonni no ho adanse?
Share Share “Womfi Wiase”
uw ti 21 kr. 161-168
Ɔsom mu Biakoyɛ—Dɛn na Ɛsɛ sɛ Ɛkyerɛ ma Wo?
Kamfo Yehowa sɛ Nokware Nyankopɔn No
So Onyankopɔn Asɛm no Mu Denneennen
Nea Adiyifo no Nyinaa Dii Ne Ho Adanse No
Ahofadi a Yehowa Asomfo Wɔ
Ɔsɛmpɔw a Ɛsɛ sɛ Abɔde Nyinaa Hyia
Nea Yesua Fi Bɔne a Onyankopɔn Ama Ho Kwan no Mu
‘Ko a Yɛko Tia Ahonhommɔne Dɔm’
Tumi a Owusɔre Anidaso no Wɔ
Ahenni a “Wɔrensɛe no Da”
‘Monkɔ So Nhwehwɛ Ahenni No Kan’
Nea W’asubɔ no Kyerɛ
Nnipakuw Kɛse a Wɔwɔ Yehowa Ahengua Anim
‘Me Ne Mo Yɛ Ahenni Apam’
Ɔkwan Bɛn So Na Yehowa Kyerɛ N’ahyehyɛde no Kwan?
Tie Afotu, Gye Nteɛso Tom
“Momfa Ɔdɔ a Emu Yɛ Den Nnodɔ Mo Ho”
Ɛho Hia sɛ Yɛde Onyamesom Pa Di Dwuma wɔ Fie
Nea Mose Mmara no Kyerɛ ma Wo
Nkwa ne Mogya—So Wubu sɛ Ɛyɛ Kronkron?
Kɔ So Ka Onyankopɔn Asɛm no a Wunnsuro
Momma Yehowa Da No Ntra Mo Adwene mu Yiye
Yehowa Atirimpɔw Di Nkonim Anuonyam Mu
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan United in Worship of the Only True God
Share Share United in Worship of the Only True God